Momba anay - Zipper ABS
Ampifandraisina tanteraka amin'ny foto-kevitra fisainana Internet ankehitriny, miaraka amin'ny fampidirana ny oniversite akanjo, ny loharanom-pahalalana ho an'ny maso mpamorona, ny ABS dia nitana toerana lehibe teo amin'ny sehatry ny indostria tamin'ny alàlan'ny famatsiana vokatra sy serivisy kalitao. Amin'ny maha orinasa maoderina antsika dia mikendry ny hitady valiny hahazoana tombony sy fandrosoana iraisana izahay. vokatra lehibe ： zipper, bokotra, faritra misy fitaovana.
Amerika atsimo, Amerika avaratra, Eropa, atsimo atsimo atsimo ary ny tsena anatiny.
maherin'ny 1200 ny mpanjifa any ivelany sy iraisam-pirenena.
vokatra azo ampiharina
fitafiana, kiraro sy satroka, kitapo, sofa, fandriana, tranolay, kitapo fatoriana, elo, kojakoja fitetezana ampiasaina.
Ao amin'ny lisitry ny marika 20 malaza eran-tany. Ao amin'ny firenena 102 voasoratra anarana marika ABS. Mihoatra ny isan'ny patanty famoronana firenena 100, patanty modely ilaina. Manaova asa fikarohana sy fampandrosoana ho an'ny faritany vaovao, izay misy vokatra 3 vaovao amin'ny alàlan'ny famantarana ny faritany. Fitaovana famokarana manan-tsaina mba hiantohana ny fahombiazan'ny famokarana, ny kalitaon'ny vokatra hahatratra ny fenitra Eoropeana.
Fampiasana teknolojia Internet, fahatsapana fa tsy misy fahasamihafana amin'ny fotoanan'ny Fanatontoloana. Fivarotana mialoha mba hanomezana mpanjifa fampandrosoana vaovao, fakan-kevitra ary vahaolana, fanofanana teknika ary serivisy fanampiny miampy sanda. Aorian'ny varotra hanomezana fanohanana ara-teknika ny mpanjifa, fitarainan'ny mpanjifa, tolo-kevitra, valiny ary fiantohana kalitao ary serivisy hafa.